Manana fanandramana manan-danja maro ny fianakaviana eo amin'ny fotoana samihafa eo amin'ny fiainana. Fotoam-piovana goavana ho an'ny mpianakavy ny sasany amin'ireo fanandramana ireo. Iray amin'ireo fiovana goavana indrindra ho an'ny ankohonana ireo ny fahaterahan'ny zaza. Manana fanandramana manan-danja eo amin'ny fiainana koa ny ankizy rehefa mitombo izy ireo. Mety hifidy ny hanorina ankohonana ho azy sy hiteraka koa izy.
Na izany na tsy izany, na ray aman-dreny ianao na zanaka ao amin'ny ankohonana iray dia samy mitolona amin'ny olana iray mitovy, ary tsy inona izany fa ny maha-mpanota antsika rehetra. Mety mahatonga ny firaisana eo anivon'ny fianakaviana ho tena sarotra izany fahotana izany.
Marina tokoa fa nampiraisina tamin'Andriamanitra sy tamin'ny samy izy tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesôsy Kristy ny olombelona rehetra (Efes. 2:13-16; Kôl. 1:21-23). Tianao ve anefa ny hisian'ny firaisana isan'andro ao amin'ny ankohonanao? Mazava loatra fa eny ny valiriy! Koa tsy maintsy mangataka amim-pinoana ny fahasoavan'i Jesôsy isan'andro ianao. Io fahasoavany io no hanampy antsika hiaina ao anatin'ny firaisana ao amin'ny ankohonantsika. Averina indray fa tokony ho fanandramana isan'andro atao amim-pinoana ny fangatahana io fahasoavany io.